Inona no ataon'ny mpitondra lanja amin'ny tongotrao? - Fanazaran-Tena
Tena > Fanazaran-Tena > Fanatanjahan-tena mavesatra amin'ny tongotra - ny torolàlana farany
Fanatanjahan-tena mavesatra amin'ny tongotra - ny torolàlana farany
Inona no ataon'ny mpitondra lanja amin'ny tongotrao?
Wearablelanja ankavananamisintona ihany koany kitrokelymitambatra, izay mametrakanyloza ateraky ny ratra amin'ny tendon na ligamentnylohalika, andilana ary lamosina. Fa azo akanjolanja ankavananadia manampy amin'ny fampiharana izay kendrenanyny hozatry ny tongotra sy ny valahana, toy ny fiakaran'ny tongotra. 'Ny lanjanymametraka enta-mavesatra lehibe kokoanyvondrona hozatra kendrena.
Mihazakazaka amin'ny lanjany: Tokony hataonao ve izany? Mahasoa anao amin'ny maha-mpihazakazaka anao ve izany? Ao amin'ny lahatsoratra anio dia valio ho anao izany fanontaniana izany. Hector Estrada Lopez eto amin'ny Aztec Athletics. Ary raha mpihazakazaka ianao dia mety mihevitra ny hampiasa lanjany mandritra ny fihazakazahana.
Mety ho tamin'ny endriny rehetra izany, ohatra. B. palitao mavesatra, mety ho lanja amin'ny kitrokely ve izany, lanjan-tànana, na tena mihazakazaka amin'ny dumbbells eny am-pelatananao ho mpihazakazaka ianao? Voalohany, mila mamakafaka ireo antony heverinao fa mila mampiasa lanjany ianao rehefa mihazakazaka.
Ny antony voalohany dia satria maniry haingana kokoa ianao. Te hampitombo ny kilometatrao ianao. Teny, te hihazakazaka haingana kokoa ianao, te hihazakazaka foana, ary te ho tsy reraky ny havizana amin'ny halaviran'ny mihazakazaka anao.
Ka te ho lasa mpihazakazaka tsaratsara kokoa fotsiny ianao. Ny antony lehibe faharoa eritreretinao fa mihazakazaka amin'ny lanjanao dia ny fanirianao hanafaingana ny tanjon'ny fihenan-danja. Rehefa mihazakazaka aho, ary te hahatratra tanjona milanja manokana ianao.
Ary ianao dia toy ny, 'Hey, fantatrao izay, raha manampy lanja sasany aho, angamba afaka mandoro kaloria bebe kokoa aho hahatratrarako haingana ny tanjoko mihena.' Ireo no antony 2 lehibe mety handinihanao ny lanjany. Ka inona no tombony azonao amin'izany? Eo anelanelanao izaho sy ianao.
Fantatro fa mety ho sarotra indraindray ny torohevitra, fa izao kosa: 'Hanome anao torohevitra marina aho. Ary izany dia: tsy tokony hihazakazaka amin'ny lanjanao ianao. Indrindra satria ny lafiny ratsy amin'ny ezaka ataonao dia tena ratsy.
Ary ny lafy ratsy dia ny fametrahanao tsindrona be loatra amin'ny tonon-taolana ka amin'ny fotoana maharitra dia handratra anao izany fa tsy hanampy anao. Saintsaino izany. Andao hampiasa fampitahana auto.
Ka manana fiara 2 izay mitovy tanteraka ianao. Fa hametaka fiara amin'ny tranofiara lehibe misy zavatra mavesatra be ianao. Ka, andao lazaina mandritra ny 50.000 kilaometatra, iza amin'ireo no atokanao? k ho tapaka be kokoa? Eny, tokony ho miharihary ny valiny.
bisikileta mandeha amin'ny ririnina
Ilay misy tranofiara lehibe misy zavatra mavesatra be eo amboniny. Satria misy fihenjanana bebe kokoa amin'ny tonon-taolana rehetra, ireo faritra mihetsiketsika ao anaty fiara, hany ka tsy maharitra mandritra ny fiara raha tsy misy ny lanjany fanampiny. Ka aleo ampiharina aminao ity fampitahana ity.
Ahoana raha manana ny lanjan'ny vatanao manokana ianao ary aorian'izany dia manampy lanjany bebe kokoa amin'ny fitaovana mavesatra fanampiny na fitaovana ampiasainao. Eny, io dia hametraka fihenjanana bebe kokoa amin'ny tadinao ary mety handratra anao kokoa. Ny mahavariana dia io koa no antony tsy mamporisika ny mihazakazaka ho an'ny olona matavy loatra satria mametraka adin-tsaina be loatra amin'ny tonon-taolana.
Saingy tsy midika izany hoe tsy tokony handeha na tsy afaka mandeha ianao. Midika fotsiny izany fa raha matavy loatra ianao dia mila manangana eo amboniny. Mampiasà karazana kardio exe izay mametraka farafahakeliny kely eo amin'ny tonon-taolana.
Ohatra ny fampiasana ny elliptical trainer na ny bisikileta. Teboka iray hafa tsy tokony hotadidina fa raha mihazakazaka lavitra ianao, rehefa mandeha ianao, dia izao no mitranga: rehefa manomboka reraky ny volo ianao dia miharatsy ny fihetsikao. Aiza ianao afaka miondrika kely kokoa, ny tananao dia misidina bebe kokoa, ny tongotrao dia misosa bebe kokoa.
Ary inona no mitranga rehefa manomboka mihazakazaka ianao? Ny miharatsy dia ny fampitomboana ny risika mety handratra anao koa. Ka rehefa ampianao ilay antony manana lanja fanampiny, indrindra raha eo amin'ny sandrinao na tongotrao io. Ny mitranga amin'ny farany dia milahatra kokoa aza ianao.
Ratsy kokoa ny fihetsikao ary vao mainka ianao mampitombo ny mety handratra anao. Fehiny: TSY milay ny mandeha milanja. Tsy mamporisika azy mihitsy aho.
Betsaka ny lafy ratsy noho ny tombony. Saingy alohan'ny handaozako anao dia tiako ny mitazona anao ho falifaly ha toro-hevitra vitsivitsy na tokony hilaza fomba hafa amin'ny fihazakazahana lanja aho izay tena hanampy anao fa tsy handratra anao, ary hanampy anao hahatratra ireo tanjonao lehibe 2 izay momba anay efa niresaka momba ny fampitomboana ny fahaizanao mihazakazaka na ny fanafainganana ny tanjon'ny fihenan-danja. Ka raha ny hampisondrotra ny fahombiazanao mihazakazaka no tanjonao.
Manoro hevitra ireto torohevitra telo ireto aho. Eny, ilay voalohany dia misy fiofanana sprint na elanelam-potoana amin'ny programa fanazaran-tena ataonao. Ny tombotsoan'ity fampihetseham-batana ity dia manampy anao hanjary hipoaka kokoa amin'ny hazakazakao.
Ka, avelao isika hilaza fa eo amin'ny tongotra farany amin'ny hazakazakao sy BOOM ianao tsy maintsy mipoaka ianao vao vita.
Ny zavatra faharoa soso-kevitro dia ny fiofanana an-tendrombohitra. Ary ny zavatra hataony dia, mitovy amin'ny fiofanana mihazakazaka na elanelam-potoana io, fa ny tena tsy itovizany dia rehefa mihazakazaka havoana ianao ary indrindra rehefa miakatra am-pitoerana dia mila manarina ny lohalinao ianao rehefa mila ilay fipoahana
BOOM .raha hahavita ny fihazakazahana dia tsy ny mihazakazaka haingana ihany no tokony hataonao, fa mitazona ihany koa ny endrika hazakazakao.
Ka ny fampiofanana an-tendrombohitra dia tena manampy anao hitazona ny endrika hazakazakao rehefa reraka ianao. Ary ny tendro fahatelo izay atoriko dia ny fampidirana fiofanana mavesatra. Ka amin'ny tendrony voalohany dia azonao atao ny mampitombo ny tanjakao hipoaka.
Amin'ny tendrony faharoa dia azonao atao ny manatsara ny endrika hazakazakao mba hipoaka. Miaraka amin'ny tendrony fahatelo amin'ny fampiofanana matanjaka dia azonao atao izao ny mampitombo ny tanjakao sy ny fiaretanao. Mba hahafahan'ny hozonao miatrika an'io fipoahana io.
Ankehitriny ny tendro izay ananako mba hampitomboanao ny valin'ny fihenan-danja dia ny manampy fampiofanana mavesatra amin'ny hazakazakao. Eny, ity dia tendrony iray izay hanampy anao hampitombo ny fahaizanao mihazakazaka, fa io kosa dia hanampy anao hahatratra ny tanjon'ny fihenan-danja. Ny tanjon'ny fihenan-danja dia ny fandoroana kaloria betsaka kokoa noho ny sakafo.
Ka na mihinana kely ianao na mampitombo ny asanao. Ka raha efa mihazakazaka ianao ary manampy fiofanana mavesatra dia mampitombo ny asanao mandoro kaloria bebe kokoa. Atambaro amin'ny sakafo tsara ity dia handeha tsara hanatratra ny tanjon'ny fihenan-danja ianao! Amin'ny ankapobeny, ny fihazakazahana amin'ny lanjany dia mampitombo ny fahafahanao mahazo ratra, ary misy safidy hafa tsara kokoa hanampy anao hahatratra ny tanjonao, ary araka ny nolazaiko tao amin'ity lahatsoratra ity, ny fampiofanana mavesatra dia manampy anao hahatratra ireo tanjona ireo.
salohim-bary masaka ve mahasalama
Ka eto ambany ny rohy ho an'ny fampihetseham-batana kettlebell 5 minitra ho an'ireo mpihazakazaka, ary ny fampihetseham-batana maharitra 10 minitra ho an'ireo mpihazakazaka hanampiana anao hahatratra ny tanjonao amin'ny fampiofanana ho matanjaka, ary toy ny mahazatra, raha hitanao fa manampy ity lahatsoratra ity dia omeo J'azy lehibe . Aza adino ny manindry ny fisoratana anarana tsindrio etsy sy ambany. Lahatsoratra vaovao isan-kerinandro hanampy anao amin'ny fampiofanana hazakazaka.
Kapohy ny tompon-daka ary tohizo ny fihazakazahana.
Inona no lanja mety amin'ny lanjan'ny kitrokely?
Araka an'i Romney,lanja ankavananadia mitovy amin'ny tarika fanoherana amin'ny heviny fa 'azo ampiasaina amin'ny toerana mijoro izy ireo na avy amin'ny tany amin'ny tongotra efatra mba hiasa ny tongotra, ny valahana ary ny glute.' azalanja ankavananaaza mazànamandanjamihoatra ny 10 na 20 pounds, hoy izy fa 'mamela anao hametraka nylanjatoy ny13 Mey 2021
Ratsy ho anao ve ny lanjan'ny kitrokely?
Ny lanjan'ny kitrokelyamin'ny ankapobeny dia tsy asaina mandeha an-tongotra. NAlanja ankavananaafaka mampitombo ny angovoianareomandoro eo am-pandehanana dia mety manapotsitra nydia fehiniraisana sytongotrahozatra, izay mety hampitombo ny risikao amin'ny ratra.
Ahoana no ahafahako mampitombo ny lanjan'ny voditongotra?
HO AN'NYLanja DIY ankle, fenoy fasika ny ba kiraro. (Miasa ny tsaramaso na ny vary nefa tsy dia milanja izy ireo.) Ny fasika 1-1 / 4 kapoaka dia milanja iray kilao eo ho eo. Rehefa avy nofenoina ny soja araka izay irinaolanja, apetraho amin'ny fisalasalana ny fasika.21 mart 2021
Mety ve ny milanja lanjan'ny kitrokely tontolo andro?
indrindralanja ankavananadia natao ho toy ny paosy fasika kely apetakao manodidina anaokitrokelinymiaraka amin'ny tady Velcro. Ilay mahazatralanjamanomboka amin'ny 1-3 pounds (eo ho eo amin'ny 0,5-1,5 kg) ary azo ampiasaina mandritra ny hetsika andavanandro na ampidirina amina fanazaran-tena.15 mart 2021
Rahoviana aho no tokony hanao mavesatra ny kitrokely?
Ny lanjan'ny kitrokely dia tokonyihany koa no ampiasaina amin'ny fanazaran-tena fampiofanana, fa tsy mandritra ny kardio toy ny mandeha na mihazakazaka.fanaovanaIzy ireo mandritra ny hetsika kardio dia mety hanelingelina anaodia fehintonon-taolana na hozatra amin'ny tongotra, atahorana ho voan'ny ratra ianao. Andramo ho an'ny alanjan-tongonymikotrana.15 mart 2021
Azoko atao ve ny mitondra mavesatra amin'ny kitrokely tontolo andro?
indrindralanja ankavananadia natao ho toy ny paosy fasika kely apetakao manodidina anaokitrokelinymiaraka amin'ny tady Velcro. Ilay mahazatralanjamanomboka amin'ny 1-3 pounds (eo amin'ny 0,5-1,5 kg eo ho eo) aryafakaampiasaina mandritra ny hetsika andavanandro na ampidirina amin'ny fanazaran-tena.15 mart 2021
Inona no lanjan'ny kitrokely na palitao milanja?
RAHAdia fehinary tananalanjatsy anao ve izany, diniho ny mitafy aakanjo milanja. 'TOakanjo milanjasafidy tsara satria mipetraka izanylanjaakaikin'ny ivon'ny hery misintona amin'ny vatana, izay mitarika amin'ny fihenan'ny vanin-taolana, tsy toy ny tanana nalanja ankavanana, ”Hoy i Ahmed.29 Mar 2021
Mampiorina hozatra ve ny lanjan'ny kitrokely?
Anthony Luke, profesora mpanampy amin'ny orthopedics ary talen'ny fitsaboana ara-panatanjahan-tena ao amin'ny UC San Francisco, dia nilaza falanja ankavananamanaohozatra, toy ny hamstrings, quadriceps ary glute, miasa mafy kokoaAzany mihetsika mitovy amin'izany.10 Sep 2007
Fa maninona aho no manana zanak'omby sy kitrokely matevina?
Cankles dia afaka miforona noho ny antony maro samihafa: ny génétika dia mety hisy fiantraikany amin'ny fizaranamatavyao anatin'ny vatana, mamaritra mialoha ny mety hisian'ny cankles. Ny fihenan-danja noho ny sakafo na ny fitondrana vohoka dia mety hitarika cankles mivoatra noho ny fitomboan'ny haben'nymatavysela ao amin'nykitrokeliny.
Inona no azonao atao amin'ny fampihetseham-batana amin'ny kitrokely?
Ny lanjan'ny kitrokely dia mahasoa indrindra ho an'ny fampihetseham-batana sy fototra. Ny fampihetseham-batana amin'ny kitrokely ho an'ny abs sy ny tongony no fanazaran-tena mahazatra indrindra hampiasana an'io fitaovana fanatanjahan-tena io. Izany dia manampy amin'ny feo sy ny famolavolana abs fisaka sy tongotra tonon. Araho ity horonantsary eto ambany ity ho an'ny fampihetseham-batana ambany amin'ny vatan'ny tongotra ambany.
Ahoana ny fomba fanaovana squat amin'ny alàlan'ny kitrokely?
Mikorisa miaraka amin'ny fisondrotan'ny tongotra 1 Afatory amin'ny kitrokely tsirairay ny lanjany 1. 2 Mitsangàna mitsangana miaraka amin'ny tongotrao somary malalaka kokoa noho ny sakany soroka ny tongotrao. 3 Aforeto ny tongotrao ary arotsaho midina ny vodinao. Ny tongotrao dia tokony hamorona zoro 90 degre. 4 Avereno amin'ny voditongony ny lanjanao ary atosiho indray ny vatanao. 5 Rehefa mitsangana ianao dia atsangano ny tongotra 1 dia miakatra mankany amin'ny sisiny (mankany
Ahoana ny fomba fanitarana tongotra amin'ny lanjan'ny kitrokely?
Ny fanitarana tongotra dia miasa ny quadriceps anao, izay hita eo anoloana ny feny. Mipetraha amin'ny seza miaraka amin'ny tongotrao fisaka amin'ny tany. Amin'ny hetsika tsy miovaova dia atsangano amin'ny tany ny tongotrao ankavanana ary atsangano mahitsy eo alohan'ny vatanao ny tongotrao. Ajanony fotsiny ny saro-kenatra amin'ny fanidiana ny lohalinao ary tazomy ny iray segondra feno.